ဒူဒူကြီး: "Port of Registry" ပြောင်းလဲမှတ်ပုံတင်ခြင်း
တိုင်းပြည်ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ၊ နိုင်ငံတကာနဲ့ ကူးလူးဆက်ဆံမှုတွေ ပိုများလာပြီး၊ သဘေ်ာတွေ ဝယ်ယူပြေးဆွဲလာကြပါတယ်။ ဒီအခါ တခြားတိုင်းပြည်တခုမှာ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့သဘေ်ာကို၊ မိမိနိုင်ငံမှာပြောင်းလဲမှတ်ပုံတင်ကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ "Port of Registry" ပြောင်းလဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး၊ ဖော်ပြထားပါတယ်။
international sea voyage အနေနဲ့၊ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေကြောင်းမှာ၊ သွားလာခုတ်မောင်းနေတဲ့ သဘေ်ာတွေကို၊ သဘေ်ာပိုင်ရှင် owner ဒါမှမဟုတ် managers လို့ခေါါတဲ့၊ သဘေ်ာကိုစီမံခန့်ခွဲသူတွေ အခြေချနေထိုင်ရာ၊ တိုင်းပြည်မှ၊ သက်ဆိုင်ရာ national administration သို့မဟုတ် authority လို့ခေါါတဲ့ အာဏာပိုင် flag state အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ၊ registration အဖြစ်၊ မှတ်ပုံတင်ရပါတယ်။ တခါတရံ လက်ရှိ မှတ်ပုံတင်ထားရာ port of registry တိုင်းပြည်မှ၊ အခြားတိုင်းပြည်တခုသို့ပြောင်းလဲပြီး၊ မှတ်ပုံတင်လေ့ရှိ ပါတယ်။
port of registry ပြောင်းလဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို၊ 'flag change' တယ်လို့ အလွယ်တကူခေါါလေ့ရှိပါတယ်။ flag change တဲ့အခါမှာလည်း၊ classification societies အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ၊ classification နဲ့ statutory ဆိုင်ရာကိစ္စတွေကို၊ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်ရဲ့ national administration သို့မဟုတ် authority ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
မူလမှတ်ပုံတင်ထားရာ၊ port of registry အတွက်၊ classification society မှ၊ ထုတ်ပေးထားတဲ့ class statutory certificates တွေအစား၊ ပြောင်းလဲမှတ်ပုံတင်မယ့် port of registry အတွက် class statutory certificates တွေထပ်မံထုတ်ပေးရပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် renewal လုပ်တယ်လို့ခေါါပါတယ်။ ပြောင်းလဲ ထုတ်ပေးမယ့် class statutory certificates တွေကတော့၊ Safety Construction Certificate, Safety Radio Certificate, Safety Equipment Certificate, Statement of Compliance Anti-fouling Certificate, Load Line Certificate, IOPP Certificate, ISPP Certificate, IAPP Certificate တို့ဖြစ် ပါတယ်။
Safety Construction Certificate, Safety Radio Certificate နဲ့ Safety Equipment Certificate တို့ဟာ၊ International Convention for Safety Of Life At Sea, 1974, as modified by the Protocol of 1988 အရထုတ်ပေးတဲ့၊ Certificates တွေဖြစ်ပါတယ်။ Statement of Compliance Anti-fouling Certificate ကတော့၊ International Convention on The Control of Harmful Anti-fouling System on Ships အရထုတ်ပေးတဲ့၊ Certificate ဖြစ်ပါတယ်။ Load Line Certificate ကို International Convention on Load Lines, 1966, as modified by the Protocol of 1988 အရ ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပြီး၊ IOPP Certificate ဆိုတဲ့ International Oil Pollution Prevention Certificate ကတော့၊ International Convention for The Prevention of Pollution from Ships, 1973, as as modified by the Protocol of 1978 အရထုတ်ပေးတဲ့၊ Certificate ဖြစ်ပါတယ်။
ISPP လို့ခေါါတဲ့ International Sewage Pollution Prevention Certificate ဟာ၊ International Convention for The Prevention of Pollution from Ships, 1973, as as modified by the Protocol of 1978 as amended by resolution MEPC. 115 (51) အရ၊ ထုတ်ပေးတဲ့၊ Certificate ဖြစ်ပြီး၊ IAPP လို့ခေါါတဲ့ Certificate ကတော့၊ International Convention for The Prevention of Pollution from Ships, 1973, as as modified by the Protocol of 1978 as amended by resolution MEPC. 132 (53) အရ၊ ထုတ်ပေးတဲ့၊ Certificate ဖြစ်ပါတယ်။
အသစ်ထုတ်ပေးမယ့် certificates တွေကို၊ interim certificate အဖြစ်၊ (၃) လမှ (၅) လ သက်တမ်းရှိတဲ့ ယာယီ interim certificates တွေအဖြစ်၊ ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပြီး၊ ယာယီသက်တမ်းကာလအတွင်းမှာ၊ တားမြစ် ကန့်ကွက်စရာ အကြောင်းတစုံတရာမရှိမှာသာ၊ အမြဲတမ်း Full Certificates တွေအဖြစ်၊ သက်ဆိုင်ရာ Classification Society မှ အသစ်လဲလှယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Flag Change တဲ့အခါ၊ ဆောင်ရွက်ရမယ့် GL လို့ခေါါလေ့ရှိတဲ့ Germanischer Lloyd ဆိုတဲ့ Classification Society တခုရဲ့ procedure တွေကို၊ နမူနာအနေနဲ့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
International Convention for Safety Of Life At Sea, 1974, အရ၊ ထုတ်ပေးတဲ့ ISM Certificate လို့ခေါါတဲ့ International Safety Management Certificate နဲ့ ISPS Code လို့ခေါါတဲ့ International Code for The Security of Ships and of Port Facilities အရထုတ်ပေး တဲ့ ISSC International Ship Security Certificate တို့ကိုတော့၊ Classification Society အနေနဲ့ အသစ်လဲလှယ်ခြင်းမပြုပဲ၊ မူလ Certificate အပေါါမှာသာ၊ Port of Registry ကိုပြောင်းလဲရေးသားပါတယ်။
International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 အရထုတ်ပေးတဲ့၊ International Tonnage Certificate, 1969 ကိုတော့ ၊ အသစ်လဲလှယ်ခြင်းမပြုပဲ၊ မူလ certificate အပေါါ မှာ Port of Registry ကိုပြောင်းလဲရေးသားကာ၊ (၃) လ သက်တမ်းရှိတဲ့၊ provisional certificate အနေနဲ့၊ ထုတ်ပေးပြီး၊ provisional သက်တမ်းကာလအတွင်းမှာ၊ တားမြစ် ကန့်ကွက်စရာ အကြောင်းတစုံတရာ မရှိမှာသာ၊ အမြဲတမ်း Full Certificates တွေအဖြစ်၊ သက်ဆိုင်ရာ Classification Society မှ အသစ် လဲလှယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Suez Canal Tonnage Calculation သို့မဟုတ် Panama Canal Tonnage Calculation Certificate ဟာ၊ Classification Society မှထုတ်ပေးတဲ့၊ Certificate ဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ မူလ certificate မှာ Port of Registry ကိုပြောင်းလဲရေးသားကာ၊ amended အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ Certificate ဟာ၊ Suez Canal သို့မဟုတ် Panama Canal Authority မှ ထုတ်ပေးတဲ့၊ Certificate ဖြစ်ခဲ့ လျှင်၊ မူလ ထုတ်ပေးရာ Authority မှသာ၊ Port of Registry ကိုပြောင်းလဲရေးသားကာ၊ amended အနေ နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Tanker သဘေ်ာတွေအတွက်၊ ထုတ်ပေးတဲ့ SOPEP နဲ့ SMPEP လို့ခေါါတဲ့ Shipboard Oil Pollution Emergency Plan Manual နဲ့ Shipboard Marine Pollution Emergency Plan for Noxious Liquid Substances Manual လို၊ booklet တွေမှာ လည်း၊ Classification Society မှ၊ Port of Registry ကိုပြောင်းလဲရေးသားကာ၊ amended အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Bulk Carrier သဘေ်ာတွေအတွက်၊ ထုတ်ပေးတဲ့ Grain Certificate ကိုတော့၊ အသစ်လဲလှယ်ခြင်း မပြုပဲ၊ မူလ certificate အပေါါ မှာ Port of Registry ကိုပြောင်းလဲရေးသားကာ၊ (၅) လ သက်တမ်းရှိတဲ့၊ provisional certificate အနေနဲ့၊ ထုတ်ပေးပြီး၊ provisional သက်တမ်းကာလအတွင်းမှာ၊ တားမြစ် ကန့်ကွက်စရာ အကြောင်းတစုံတရာ မရှိမှာသာ၊ အမြဲတမ်း Full Certificates တွေအဖြစ်၊ သက်ဆိုင်ရာ Classification Society မှ အသစ် လဲလှယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Stabily booklet, Cargo Securing Manual, Garbage Management Certificate နဲ့ Garbage Management Plan အစရှိတဲ့ booklet, certificate နဲ့ plan တွေဟာ၊ Classification Society မှထုတ်ပေး တဲ့၊ booklet, certificate နဲ့ plan တွေဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ Port of Registry ကိုပြောင်းလဲရေးသားကာ၊ amended အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ကိုထွန်း at 03:28